မှန်မှန်ကန်ကန် ချစ်တတ်ကြဖို. – PoemsCorner
ချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးချင်တယ်။ အချစ်ကိုတော့ ကျွန်တော်သိပ်နားလည်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်သလောက်ပေါ့။
အချစ်ကို ကျွန်တော်တို့ အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတာ ဟိုးဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက ကဗျာတစ်မျိုး စာတစ်မျိုးနဲ့ စပ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ခုထက်ထိလည်း ဖွဲ့ဆိုနေကြတုန်းပါ မရိုးနိုင် မအီနိုင်အောင်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာမျိုးကို ဘယ်လိုပဲ အနက်ဖွင့်ဖွင့် ထပ်တူညီတာလေးတွေ ရှိနိုင်သလို ကွဲပြားမှုပေါင်းများစွာလည်း ရှိပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ သဘာဝတရားက ပြုပြင်ဖန်တီးပေးမှု ၃၀% နဲ့ စိတ်ခံစားမှု ၅၀% ပတ်ဝန်းကျင်က သက်ရောက်မှု ၂၀% လောက်လို့ ပြောရင်တော့ မမှားပါဘူး။
လူတိုင်း စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး သာယာချမ်းမြေ့သော လူ့ဘ၀လေးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။
In: ဝတ္ထု,ကြည်အေး Posted By: johnkosonyhung Date: Nov 18, 2010
စူပါမင်း မပျံတဲ့နေ့တွေ (သုခမိန်လှိုင်)
Leave comment6Comments & 1,780 views
ူသူငယ်ချင်း ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး ထားပေးပါ ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လိပ်ပြာပါ။
By: butterfly at Nov 20, 2010
By: kks at Nov 20, 2010
By: monmm at Nov 20, 2010
သူငယ်ချင်း…..မင်းက copier တစ်ယောက် ဆို၇င်တောင် မူ၇င်းေ၇းတဲ့သူကိုတော့ မင်းက ကိုယ်ချင်းစာသင့်တယ်ထင်တယ်….အခုတော့ မင်းက clip တစ်ချက်လောက် နှိပ်ပြီး ၀တ္ထုကြည်အေး ဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်နိုင်တယ်…တော်တော်လေးစားဖွယ် ပဲကွ….။ကြည်အေး ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာေ၇ာ သိ၇ဲ့လားကွာ…
By: moehtat at Nov 21, 2010
Mr.johnkosonyhung, i don’t know why u changed this novel’s title and posted on this novel at our poem corner. we know well who is original author of this novel. He is butterfly who post on it nov 16th. that’s why you should respect all of original authors in here. pleas don’t make to confuse to all readers.
By: phoe kyaw at Nov 26, 2010